Abavelisi beeMonons -iTshayina abaThengisi beVenkile kunye neFektri - Icandelo le-6
IPHEPHA LESITHUBA SENKCUBEKO YAKHO IPHEPHA LENKCUBEKO NGEENCWADI ZE-U304S0200A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U304S0200A Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili IBAP apron, isiseko se-apron Fabric 65/35 poly / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, 2 service as times 2 Idyasi yesiqhelo yesiqhelo. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukumelana kakuhle ne-abrasion, i-shrinkag ephantsi ...
I-WED RED BASIC POLY COTTON IBHODI YOKUZIPHATHA KUNYE NELINYE LEPOTAET U304S0400A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U304S0400A Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili IBAP apron, isiseko se-apron Fabric 65/35 poly / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, life service times 2 times as Idyasi yesiqhelo yesiqhelo. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukumelana kakuhle ne-abrasion, i-shrinkag ephantsi ...
UMGAQO-NKQUBO WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA WOKUFUNDA NGE-KHAWU YOKUGQIBELA NGE-3000S0500A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U304S0500A Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili IBAP apron, isiseko se-apron Fabric 65/35 poly / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, life service times 2 times as Idyasi yesiqhelo yesiqhelo. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukumelana kakuhle ne-abrasion, i-shrinkag ephantsi ...
UMNQOPHISO WOKUFUNDA DENIM IBHODI YENKOLO EMVA KWE-APRON EYENZELWE IIPOTI U335C39P2T
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U335C39P2T Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili IBAP apron, i-denim kunye ne-apron yesikhumba, i-apron enqamlezileyo Fabric 20/80 poly / ikotoni GSM.346g Ukuthunga Intambo yePolyester ikwabizwa ngokuba ngumtya wamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukuxhathisa okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester awuchasanga ne-corrosion, ukumelana nemitha ...
INDIGO DENIM UMVUZO IBHODI YENKOLO EMVA KWE-APRON NGAMABHUKA U335C40P2T
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U335C40P2T Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili IBAP apron, i-denim kunye ne-apron yesikhumba, umnqamlezo we-apron Fabric 20/80 poly / ikotoni GSM.346g Ukuthunga Umsonto wePesterester kukwabizwa ngokuba ngumtya wamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukuxhathisa okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester awuchasanga ne-corrosion, ukumelana nemitha ...
I-DIVIM DENIM I-APRON YEMPAHLA NGEEMPAWU I-U335C3913T
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U335C3913T ubungakanani INDLELA YOKUGQIBELA Amagama aphambili, i-denim apron Fabric 20/80 poly / ikotoni GSM.346g Ukuthunga Umsonto wePolyester ukwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester ayihambelani ne-corrosion, ukumelana nethambisi, kwaye ayibuthi mbungu. Kwi ...
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U335C4022T ubungakanani INDLELA YOKUGQIBELA Amagama aphambili, i-denim apron Fabric 20/80 poly / ikotoni GSM.346g Ukuthunga Umsonto wePolyester ukwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester ayihambelani ne-corrosion, ukumelana nethambisi, kwaye ayibuthi mbungu. Kwi ...
INDIGO DENIM UMVUZO WESIQINISEKILEYO SEBHASARI YOKUGQIBELA APRON YAMABHUKA U335D40P2T
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U335D40P2T Ubungakanani BONKE SIZE Amagama aphambili IBAD denim apron, jikeleza umva umdubulo Fabric 20/80 poly / cotton cotton GSM.346g Ukuthunga Umsonto wePolyester ukwabizwa ngokuba ngumsonto wamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester uxhathiso lwe-corrosion, ukumelana ne-isikhutha, kwaye awenzi ...
IBlack DENIM ISIQINISEKISO SEBHABHI APRONI NGEEMPAWU ZE-U335D3913T
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U335D3913T ubungakanani INDLELA YOKUGQIBELA Amagqabantshintshi amafutshane, umpheki wekhitshi wephedi Indwangu 20/80 isitayile / ikotoni GSM.346g Ukuthunga Umsonto wePesterester kukwabizwa ngokuba ngumtya wamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester uxhathiso lwe-corrosion, ukumelana ne-mildew, kwaye ...
INDIGO DENIM ISIQINISEKISO SEBHABHALI YENKUNDLA NGEEMPAHLA U335D4022T
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U335D4022T ubungakanani INDLELA YOKUGQIBELA Amagama aphontshane, i-denim ekhitshini chef apron Indwangu 20/80 poly / ikotoni GSM.346g Ukuthunga Umsonto wePesterester kukwabizwa ngokuba ngumtya wamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukuxhathisa okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester umelana ne-corrosion, ukumelana nobumnene ...
IKITCHEN CANVAS ISIQINISEKILEYO APRON YENCWAD YOKUGQIBELA NGAMAPOTI U3064D001049U
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U3064D001049U Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili e-bib apron, iiapile ze-canvas kunye neepakethe Indwangu 85 / iphuli / ikotoni Ukuthungela umsonto wePesterester kukwabizwa ngokuba ngumsonto wamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester ayihambelani ne-corrosion, ukumelana ne-mildew, kwaye ayi ...
IKITCHEN CanVAS IBHALI YENKQUBO YECHEFU NGEEMPAWU U3064C001049U
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U3064C001049U Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili e-bib apron, iiapile ze-canvas kunye neepakethe Indwangu 85 / iphuli / ikotoni Ukuthungela umsonto wePesterester kukwabizwa ngokuba ngumsonto wamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukuxhathisa okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester uxhathiso lwe-corrosion, ukumelana ne-isikhutha, kwaye uyenza ...
<< <Ngaphambili 234567 Okulandelayo> >> Iphepha 6/7